7 sababood oo aad ku guulaysan wayday
7 sababood oo aadan u rabin inaad seegto Cuntada Heels Agoosto 13
Haddii aadan wali xaadirin dhacdada Meals on Heels, waxaa jira toddobo sababood oo wanaagsan oo aad ugaqeyb gasho sannadkan, taasoo waliba dhacda inay tahay sanadkii toddobaad ee dhacdada. Iyo xitaa haddii aad tahay Cunto on Heels halyeeyga, waxaa jira dhowr laalaab oo cusub oo loogu talagalay dhacdada sanadkan si loogu farxo.
Marka maxaa weyn ee ku saabsan Cunnooyinka Ciribta, marka laga reebo inay tahay dhacdadeena ugu weyn sanadka si aan gacan uga geysano taageerida bixinta in ka badan 1 milyan oo cunto ah oo ku yaal magaalooyinka Mataanaha ah? Akhriso si aad u ogaato sababta ay tahay inaad noogu soo biirto Khamiista, Agoosto 13, Barxada Jasiiradda Harriet.
Sannadba sanadka ka dambeeya, kabaha loo xidho Cunnooyinka Cidhibtiina way sii casriyayaan. Laadadka soo jiita dareenka ugu badan waxay ka kala duwan yihiin heer sare ah ku si xad dhaaf ah hal abuur leh ku madadaalo iyo ciyaar leh. Dariiq kasta oo aad dooratid, waxaad kuheli doontaa tartan badan oo ku saabsan habka laguu xusho Halyeeyga Weyn ee Swank Soles - abaalmarin la siiyo kabaha ugu sarreeya ragga iyo dumarka.
Tilmaam Pro: Dhaqaaq bartaada Twitter ama Instagram ka dib! Qofka ugu badan ee jecel, retweets iyo kuwa ugu cadcad sawirka kabaha oo ay kujiraan hashtag #swanksoles ayaa la gelayaa finalka tartanka. Laakiin marka hore, raac Cunnooyinka Ciribta Facebook, Instagram iyo Twitter.
Markaad darsin cunto kariyeyaal waawayn ku dhejiso Magaalooyinka Mataanaha ah ee hal qol, macaanku waa hubaal inuu dhici doono. Sannadkan, Cunnooyinka kaqeybgalayaasha Cidhibtirka ayaa laga soo qaadi doonaa waxyaabaha ugu fiican ee laga bixiyo Salaan Bar Américain, Buluug Pittsburgh, Weelka dhalaalaya, Red Stag Supperclub, Pizza Lucé, Muddy Paws Cheesecake, The St. Paul Grill, Zelo, Naadiga 5-8, Si fudud Steve's Food Truck iyo Café Bon Appétit oo ku taal Xarunta Taariikhda ee Minnesota. Ku dar sharaabkan macaan ee leh cabitaanka aad ka hesho Shirkadda Soo Saarida Summit iyo Wadajirka Cider Werks ama khamri ay bixiyaan Grille Street Grille.
Sida aad u aragto, barxadda Harriet Island Pavilion ee qorrax dhaca waa goob aad u fiican oo lagu joogo.
4. Abaal marinno, abaalmarinno iyo abaalmarinno dheeri ah
Cunnooyinka kaqeybgalayaasha Cidhibti waxay leeyihiin fursad ay ku galaan sawir gacmeed lagu camiray abaalmarinno waaweyn. Tigidhada diyaaradda laga bilaabo Diyaaradda Southwest, caws jare ka Tooro, ah Baaskiil koronto, iyo baakado badan oo hudheel ah oo joogitaan ah ayaa ah wax yar oo ka mid ah abaalmarinnada waaweyn ee laga heli karo 10 baakado waaweyn oo bakayle ah.
Tilmaan kale oo pro ah: Iibso baalal tikidhada raafka loogu talagalay $20, oo raadi qofka ugu dheer qolka inuu tiriyo tikidhadaada!
5. Daabacaadda shaashadda
Sannad kasta wax cusub ayey ka keenaan Meals on Heels sannadkana waa daabacaadda shaashadda. Waxaan soo bandhigi doonnaa dhowr naqshadood oo si gaar ah loogu sameeyay dhacdada sanadkan waxaadna awoodi doontaa inaad iibsato oo aad ku daabacdo nashqadda aad ugu jeceshahay wadarta guud, taangiyada, funaanadaha iyo dhallaanka goobta ku jira!
6. Madadaalo iyo ciyaaro
Ka dib markii aad booqatay banner-ka tallaabada-iyo-ku-celinta si aad u gasho Swank Soles-kaaga tartanka, hubi inaad saaxiibbadaa ku qabsato markooda Cunnooyinka ku yaal Cidhib Sawirka Sawirka mahadsanid Mister Berndt Sawir.
Ama ku guuleysto dhalo khamri ah adoo isku dayaya gacantaada Fling Ring ee barxadda, dib ugu noqo dalab caan ah oo ay ugu wacan tahay kafaalo qaad ka Saint Paul Jaycees. Marka laga hadlayo kafaala qaadayaasha, midkoodna baashaalkan suurtagal ma noqon doono haddii aan la helin taageerada shirkadda The Scoular, Thrivent Financial, Xcel Energy, 3M, UPS iyo The Walser Foundation, oo ay maalgeliso shirkadda Walser Automotive Group.
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in muusigga munaasabadda sannadkan ay bixin doonaan Ashley Gold oo leh marti qaas ah Fasax. Waxaa ku sharraxay Bogagga Magaalada "ma aha celceliskaaga heesaha-heesta-heesta," Gold wuxuu isku daraa waxyaabo ka kooban R&B, pop iyo folk, muusiggeeda. Magaca ayaa laga yaabaa in dadka qaar yaqaaniin, maadaama ay iyaduna ka soo muuqatay Meals on Heels sanadkii 2010. Waxay ku soo laaban doontaa fiid kale oo madadaalo leh iyadoo wadata heeso cusub.
Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan soo bandhigno laba indhood oo gaar ah dhacdada sanadkan. Falen, oo ah martigeliyaha barnaamijka KDWB ee Dave Ryan Show, ayaa ku soo laabtay si uu u bixiyo faallo midab leh oo leh qiyaas dheeri ah oo qaab ah dhacdada sanadkan. Cunto ku Cusub Cunnooyinka Ciribta waa wariye KARE 11 ace ah Jana Shortal, oo ka sokoow warbixinteeda, had iyo jeer waxay u taagan tahay madadaalo sabab wanaagsan.
Weli xayndaabka? Jana iyo Ashley waxay kuu sheegayaan sababta aad ugu biireyso:
Waxaan rajeyneynaa inaad nagula soo biiri kartid 13ka Agoosto wixii hubaal ah inay noqon doonaan dhacdo weyn oo lagu taageerayo gaarsiinta cunnooyinka nafaqada leh waayeelka iyo dadka naafada ah ee ku nool Minneapolis / St. Deegaanka Paul metro. Tigidhadaada hel maanta!
Ogast 5, 2015